A na-ese foto nke onye nọchiri Sony Xperia XA | Gam akporosis
Foto nke onye nọchiri Sony Xperia XA pụtara
N'oge a, a na-etinye mmelite ahụ n'ọtụtụ ọdụ Ha bụ, gụnyere Sony Xperia Z5, ọnụ na-eme ka ọ dị ọhụrụ na mmelite nke bụ na-anata ezigbo nyocha site na ndị nwe nnukwu Android smartphone a.
Usoro Z nke dochiri anya X ma nke anyi huru otutu ntaneti n'ime afo gara aga. Ọ bụ otu ihe ahụ ka mbipụta ọhụrụ ahụ ga-abịa dịka ọ ga-eme onye nọchiri Xperia XA, nke anyị nwere ugbu a usoro ihe oyiyi nke ahụ gosipụtara ya n’ịma mma ya nile.
Ihe oyiyi ndị a enye a sara mbara echiche na imewe nke ekwentị, karịsịa ihe ga-abụ ihu na akụkụ. Otu n’ime onyonyo a gosiri n’ihu ekwentị ahụ ihe bu ekweisi, ihe mmetụta dị nso, akara Sony na igwefoto n’ihu. Nwere ike ịhụ obere mpempe akwụkwọ na ala nke ihuenyo nwere ike ịbụ igwe okwu stereo n'ihu.
Ọ bụ na onyonyo ọzọ ị nwere ike ịhụ Ọdụ USB Type-C na igwe okwu ọdịyo nke 3,5 mm. Dị ka nke gara aga, ekwentị ga-enwe ihuenyo 5-anụ ọhịa. Ihe anyị enweghị ike igosi gị bụ igwefoto azụ na ihe mmetụta mkpịsị aka ga-abụ. Agba ndị na-acha uhie uhie, odo odo na-acha anụnụ anụnụ maka ụdị atọ.
Ihe dị iche iche banyere ihe oyiyi ndị a bụ na ha na-egosi anyị onye nọchiri anya Xperia XA ụfọdụ nnukwu bezels ma na ala na elu nke ngwaọrụ ahụ, ụzọ ga-adị na Google Pixel na nke gara aga Japanese ika ngwaọrụ.
Ihe ọhụụ ọ bụla bụ Xperia XA nwere ike ịbụ ọkọnọ na MWC 2017 na Barcelona dị ka o mere n'afọ gara aga na usoro X ọhụrụ nke egosiri na otu ụlọ ọrụ ya niile na ngosi ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sony » Foto nke onye nọchiri Sony Xperia XA pụtara
Juan Ariagada dijo
Ọ bụrụ na m nwere ihe ọchị funnier ọ ga-abụ ezigbo nhọrọ
Zaghachi Juan Arriagada
Gussttavo Vassquez dijo
Zaghachi Gussttavo Vassquez
Microsoft nwalere Cortana maka gam akporo na ihuenyo mkpọchi